Uri kushanda nePhilanthropic Organisations? | Martech Zone
Uri kushanda nePhilanthropic Organisations?
Chitatu, November 15, 2006 Chipiri, Mbudzi 21, 2017 Douglas Karr
Nhasi ndabatana nekambani yangu inobatsira, ExactIMPACT. Ini handigare ndine mukana kana zviwanikwa zvekudzosera saka ndakafunga kuti ndinofanira kuita rimwe basa rerudo kunzvimbo yandinopedza nguva yakawanda ndiri! Iyi yekutenda iri kutarisa isina kujeka kune vanopa rubatsiro avo vanoona pamusoro pevakawanda munharaunda medu vasingakwanise kuzvitarisira. Icho chirevo chakasuruvara chakapihwa simba rehupfumi hwedu. Imwe nhamba yekuchengeta mundangariro ndeyekuti kana vanhu vachiyera kushaya mabasa, ivo vari kungoverengera vanhu vachishandisa mari yekushaya basa. Kune vamwe vanhu vazhinji vasina mabasa uye vari kutsvaga mabasa asingakwanise kuawana.
Mune chero hupfumi hwehupfumi, iwo makambani anonyatso kubudirira. Kana iwe usina kuwana mukana wekuitarisa, ndinokurudzira Iyo Corporation. Iyo bhaisikopo inodhonza tambo 'dzakasara', asi ndinoyemura fungidziro yemuvhi… ndiko kuti 'makambani' haana rimwe basa kunze kwekuita purofiti. Ndiro chete basa rine stock kune stockholder.
Nekuda kweizvozvo, makambani mazhinji anoregedza kutora chikamu mune rubatsiro uye zvimwe zviito zvekupa. Izvo zvinosuruvarisa. Asi makambani mazhinji ANOITA, uye haunzwi nezvawo kazhinji. Scott Dorsey, CEO we ExactTarget, vataura nhasi nezve Salesforce uye nezvesimba rekutyaira ravari. Handina kumboziva! Ndakawana chinyorwa chazvino chinotaura kwachiri:
Benioff akavimbisa kuti kambani yakatora muenzaniso wekupa 1% yequity, 1% yemubatsiro uye 1% yenguva yemushandi kubva pakutanga. Salesforce.comâ? 'S IPO muzhizha ra2004 pakarepo yakashandura iyo 1% yeiyo equity kuita madhora gumi nemaviri emidziyo, ichichinja hwaro kuita rakakura sangano husiku. Asi kupihwa kwevashandi nguva ndiyo yakakosha chikamu chegadziriro muBenioffâ? S maonero nekuti inoona kuti kambani yese inotora chikamu muchirongwa chekupa rubatsiro, zvichikanganisa zvakanyanya tsika yekambani?
Scott ari kupokana nekomiti yedu kuti irongedze kuyedza kwedu kwekupa kuti ive inoyera seSalesforce. Iri idambudziko rinotyisa! Basa rakadai rinogutsa. Ndiri kufara kuve chikamu chekomiti uye chikamu chekambani. Kana iwe uchidavira kuti makambani anofanirwa kuita zvakawanda, pamwe unofanirwa kutanga kubvunza vatengesi vako kuti vari kudzosera sei kunzanga. Dai paive nekumanikidzwa kwakawanda kuti makambani aite zvimwe, ivo vaisazowana budiriro yavanoshuvira vasina rupo. Rimwe remasangano atiri kutsvaga kubatsira i Wheeler Mission:
Kune vanhu vanosvika zviuru gumi nezvishanu vasina pekugara muguta redu gore rega rega
Yese pekugara yakapihwa: 5,960 XNUMX
Hwerengedzo yezvikafu zvakapihwa: 19,133 XNUMX
Hwerengedzo yehombodo dzegirosari dzakagoverwa: 434
Varume makumi matanhatu nesere vaive pachirongwa chedu "Zvakakosha Zvekudiwa": izvo zvakatonyanya kupfuura nakare kose pachirongwa ichocho
Pane imwecheteyo tsamba, Iyo Wheeler Mission muno mutown unonyatsoda rubatsiro rwako gore rino. Kana uchikwanisa, siya zvimwe zvekudya: Turkey, Homemade Macaroni uye Cheese, Kukanya, Green Beans, Green Salad, Nyowani Cranberry Sauce, Dinner Rolls, Apple Cider, Keke uye Mapayi Iwe unogona zvakare kupa online! Wheeler arikutsvagawo 100 vanozvipira kuti vabatsire neDrumstick Dash, yavo hombe fundraiser yegore.
Tags: benioffchaiyoimpactchaizvosalesforcescorr dorseymubatanidzwaiyo Wheeler basa
Wepamusoro 10 Matipi Ekutora Iri Nani Kubhadhara Simudza
Zvese Zvigadzirwa Kutaurirana